Maamulka Barcelona Oo Go'aamiyay Wakhtiga Ay Doonayaan Inay Iska Dhammaystiraan Saxeexa Antoine Greizmann - Gool24.Net
Maamulka Barcelona Oo Go’aamiyay Wakhtiga Ay Doonayaan Inay Iska Dhammaystiraan Saxeexa Antoine Greizmann
Maamulka kooxda Barcelona oo uu ugu horreeyo madaxweynaha kooxdaas ee Josep Maria Bartomeu ayaa lagu soo warramayaa inay qaateen go’aanka ay si deg deg ah ugu dhammaystirayaan saxeexa weeraryahan Antoine Greizmann.
Barcelona ayaa qarka u fuushay inay xilli ciyaareedkii hore la saxeexato Greizmann balse xiddigan ayaa go’aansaday inuu baaqi kusii ahaado Atletico Madrid waxaana uu ugu dambayn maalmo kahor shaaciyay bixitaankiisa.
Sida laga soo xiganayo barnaamij ciyaareedka ree Spain ee Jugones, Madaxweyne Bartomeu ayaa go’aan shaqsi ah ku qaatay inuu heshiiskan hore u dhammaystiro maadaama oo ay shaqadiisa tahay.
Haddiiba ay Barcelona Isniinta oo ah wakhtiga ay qorshaysatay ay ku dhawaaqdo saxeexa Greizmann ayay xaalad quus ah galin doontaa saddexda kooxood ee kala ah Paris Saint-Germain, Bayern Munich iyo Manchester City.
Damaca kooxahan saddexda ah ee kale ayaa marka hore meesha ka maqnaa balse waxa ay bilaabeen dhaq-dhaqaaqa kaddib hadalkii cadaa ee uu Greizmann ku sheegay bixitaankiisa.
Si kastaba, Maalmo mashquul ah ayaa la filayaa inay kusoo wajahan yihiin suuqa kubadda cagta Yurub balse waxkasta ayaa la fududayn karaa haddii ay kooxi si dhab ah ula timaado lacagaha lagu burburin karo heshiiska haatan ee Antoine.
Qandaraaska haatan ee weeraryahanka Atleti ayaa ah mid 200 Milyan lagu burburin karo balse 1-da bisha soo socota ayuu noqon doonaa mid hoos usoo dhaca oo noqon doona 120 Milyan.
Ugu dambayn, Haddii imaatinka Antoine Greizmann uu dhaco ayuu dhibaato ku abuuri doonaa ciyaartoy badan oo haatan Barcelona jooga oo uu ugu horreyn doono Philippe Coutinho oo dhibaato kala kulmaya jamaahiirta bandhigiisuna liito.